हजारौं भ्रष्टाचारी नेता पाल्नु भन्दा बरू एउटै राजा पालौं, देशले चाँडै बिकासको कोल्टे फेर्छ: निखिल उप्रेती – Points Nepal
हजारौं भ्रष्टाचारी नेता पाल्नु भन्दा बरू एउटै राजा पालौं, देशले चाँडै बिकासको कोल्टे फेर्छ: निखिल उप्रेती
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २७, २०७८ समय: १८:५३:५३
काठमाडौं। अभिनेता निखिल उप्रेतीले देशलाई प्रेम गर्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा आह्वान गरेका छन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर एकीकृत शक्ति नेपाल घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उप्रेतीले देशमाथि घात गर्ने दुश्मनहरुको प्रतिकार गर्न अपिल गरेका हुन।
नकारात्मक शक्ति बढ्दै जाँदा नेपालको राजनीति आजको अवस्थामा पुगेको उप्रेतीको भनाइ थियो। आज राजनीति गर्ने ती नेताहरु कोठा कोठामा पार्टीको घोषणा भइरहेको छ तर, मिल्न सक्ने क्षमता साहस धेरै कमले देखाउन सक्छ। जब देश वि’रामी हुँदा देशको उपचारका लागि मिल्न सक्दैनौ भने ती काल्पनिक र कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहहरुले भोलि के गर्न सक्लान भन्दै
‘किन लाग्यौ? कि बनेन नेपाल? धेरै कमले महसुस गरेका छन्। देशका लागि राम्रो गर्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौं। आफ्नो स्वार्थ हेर्छौं। फेरि चुनाव हुँदैछ। यस्ता व्यक्तिहरुलाई फेरि भोट दिने?’ उनले प्रश्न गरे। अहिलेका नेताहरुबाट देश विकासको आशा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
‘यी व्यक्तिहरुले फेरि देश विकास गर्छन् के आशा होला उनको प्रश्न? आफ्नो भावी सन्ततिको माया छ भने यिनीहरुको खुलेर प्रतिकार गरौं। नत्र भने हामीले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनका लागि हुनेछ। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो। यो भूमिको डिमान्ड हो। सजिलै अरु ठाउँ जान बनाउने होइन, ’उनले भने, हजारौं भ्रष्टाचारी नेता पाल्नु भन्दा बरू एउटै राजा पालौं, देशले चाँडै बिकासको कोल्टे फेर्छ।’
Last Updated on: December 13th, 2021 at 6:53 pm